Wararka Maanta: Jimco, Jun 25, 2021-22 sano iyo bar xabsi ah oo lagu riday askarigii dilay Goerge Floyd
Dacwad oogeyaasha kiiskaan ayaa doonayay in 30 sano oo xabsi ah lagu rido Derek Chauvin, iyadoo loo eegayo saameynta ka dhalatay dilka ninka madowga ah.
Dhinaca kale, qareenada u doodayay sarkaalka booliiska ah ayaa doonayay in lagu xukumo 15 sano oo xabsi.
Chauvin dambiga lagu haystay waxaa sii xumeeyay afar arrimood oo kala ah, in uu si arxan darro ah ula dhaqmay Floyd, inuu sameeyay ku takri fal awoodeed, inuu dambiga galay isagoo qeyb ka ah koox booliis ah iyo inuu dilku ka dhacay goob ay carruur ku sugnayd.
Peter Cahill oo ah garsooraha maxkamadda xukunka riday ayaa sheegay xukunka lagu riday Derek Chauvin in uusan ku saleysneyn qiiro ama naxariis, laakiin uu yahay xukun caddaalad ah oo ka tarjumayay dambiga eedeesanaha.
Waa xukunkii ugu dheeraa oo sarkaal boolis ah abid lagu xukumo, taariikhda gobolka Minnesota.
Sanadkii lasoo dhaafay boqolaal kun oo dadweyne oo ka caraysnaa dilka Goerge Floyd ayaa isugusoo baxay dalka Maraykanka oo xilligaas aad ula daalacayay faafitaanka caabuqa Covid19.